Warbixin – Midowga Shirkadaha Korontada ee BECO | HimiloNetwork
Warbixin – Midowga Shirkadaha Korontada ee BECO
Posted by: Zakariya in Wararka July 25, 2017	0 339 Views
Muqdisho (Himilonews) – Isu-tagga midowga shirkadaha bixiya korontada wuxuu irid laba fursad u furan u noqday dadka iyo saamileyda ku midaysan. Taniyo markii ay meesha ka baxday wakaaladda xoogga korontada qaranka ee Eneeyo, shirkadaha gaarka loo leeyahay ee bixiya adeeg koronto waxay hadba kusoo jireen hayaan kaligii socod ah.
Si kastaba saddex sano ee lasoo dhaafay waxaa shirkadaha xoogga korontada ee Muqdisho ka wada howl-gala ka mid noqotay shirkaddaha BECO oo ka kooban 3 shirkad oo mid kasta oo ka mid ah ay ka koobneyd shirkado yaryar oo isu tegay.
Bilowga horaba, anba-qaadkeeda ma ahayn mid adag, marka loo eego tirada macmiisha ee saddexda shirkadood ka kala socday. Sidaas darteed, midowgeedu wuxuu soo dhaweyn muuqata ka helay dad badan oo ay kamid ah yihiin Abdiqani Cabdinuur Ibraahim oo ah ganacsade iyo Fartun Axmed oo ah hooyo carruur haysata.
Abdiqani wuxuu sheegay in midowgu korontadu la timid is-baddal uusan filayn.
“Shalay iyo maanta farqi weyn baa u dhaxeeya – dhan kasta deegaanka iyo ganacsiba,” ayuu yiri isaga oo gocanaya sidii ay u adkeyd inuu habeen ganacsado maadaama aysan jirin koronto u suura-gelisa sii shaqeynta xilli danbe.
Markii Fartun ay ku jirtay heerka wax-barashada bilowgii qarnigan 21aad, waxay xusuusan tahay sidii ay u adkeyd helidda ileys ay gudo iyo iftiin ay ku aqristo duruusta loo soo dhigo maadaama adeegyada koronto ee la bixiyo aysan kaafin karin baahidii ay qabtay.
“Habeenkii oo dhan saacado kooban ayaa laga heli jiray ileys koronto; aniga ahan, waxaan xusuustaa siday iigu adkeyd inaan habeenkii cashar aqris usoo kaco ileen koronto ayaan jirin – mar kasta waxaa qasab igu ahayd inaan inta yar ee ay joogto aan ka faa’iidaysto,” ayay tiri Fartun oo hadda ah sey afadiis oo la nool carruurteeda.
Helidda adeeg koronto oo 24 saac ah iyo qiimo aad uga hooseeya waagii hore, waxay albaab u furtay adeegsiga korontada inuu kordho, marka loo eego Abdiqani kaas oo tilmaamaya in xattaa habka bixinta ee qidmadda kirada adeegga korontada ay ku timid is-baddal uu ku sheegay mid aan u dhaweyn sidii hore.
“Waagii hore, wax walba waxay ahaayeen ad-adeyg; majirin hab iyo waddo hagaagsan oo la iskula macaamilo. Lacag caddaan ah inaad isla markiiba dhiibto dhamaadka bisha ama lagaa jaro fiilada kusoo gasha ayaa ahayd labada doorasho ee ku hortaalla,” ayuu yiri. “Laakiin hadda waxaa yimid hab fudud oo lacagaha la iskugu diro – 100% nidaamkan ayaa ka fiican uma dhawana kii hore.”
Si muuqata marka loo qiimeeyo biilka korontad oo midowga kahor ka kici jirtay hal doolar iyo laba sinti – haddana ah kusii socota 0.6 halkii kilo-waatba, waxay Fartun Axmed ka dhigtay inay rumaysto in dalku ku biirayo dalalka horumar fiican ka sameynaya adeegga xoogga korontada
“Qof kasta maanta wuu awoodaa adeegsiga koronto qiimo jaban, micnaheeduna waa in 24 saac adeegsan karo – runtii dalal kale oo nala deris ah ayaan kaga horumaraynaa dhinaca korontada,” ayay tiri.
Hadda oo shirkadda BECO ay ku jirto sanadkii saddexaaad taniyo markii la aas’aasay 5-tii bisha May sanadkii 2014, waxay adeegga ay heyso ku baahinaysa meelo ka baxsan caasimadda, sida uu inoo sheegay madaxa suuq-geynta shirkadda Abdiraxman Maxamed Alasow. Wuxuu intaas raaciyay in adeeggoodu tiir-dhaxaad u yahay bilowga irid cusub oo u furantay ganacsiga Soomaaliya.
“BECO waxay la timid fursad ay heleen shirkado leh warshado yaryar iyo kuwa waaweyn inay howl-galaan waayo waxay awood u heli karaan helidda koronto ku filan,” ayuu yiri. “Dhamaan warshadaha iyo mashaariicda kale ee ay maal-geshanayaan Soomaalida iyo ajaaniibta kale waxaa fure ah shirkadeenna.”
Farriimaha qaar ee laga bixinayo midowga shirkadaha korontada, malahan hal aragti. Waxaa jira in kale oo tani ku tilmaami karta dharbaaxo kulul oo lala dhacay wajiyada saamileyda kale ee quudarraynaya inay bixiyaan adeeg koronto.
Haddii madmadowga qaar ee tilmaama in afduub lagu qabsaday suuqa xorta ah ee dalka jira siiba adeegga korontada ay helaan daalacnaantii loo baahnaa, waxaa hubaal ah in shacabku ku raaxaysan karaan adeeg ku dhisan qiimo jaban iyo tayo sarreysa.
Helidda loolan caadyaal ah oo ay wada galaan dhamaan shirkadaha wada bixiya xoogga korontada oo ugu danbeyn mid un ay kusoo baxdo, waxay macmiil badan sida Fartun aaminsan tahay inay hanan karto mudnaantii wakaaladda xoogga korontada ee Qaranka.
“Waxaan aaminsanahay inay u qalmaan shatiga wakaaladda xoogga korontada qaranka – haddii ay sidaas iyo si kasii qurux badan ku howl-galaan. Dowladuna waa inay ku abaal-gudaa arrinkaas.”
Previous: Nigeria – Hooyo cunugeeda ku iibsatay Mooto!
Next: Laba wiil oo wajiga madax-weyne caan ah ku dhacay lacago fara badan!
Sababta Lammaane ay Gabadhooda ugu bixiyeen Wi-Fi
La kulan – Macalinkii Maskaxdiisa iyo Mushaharkiisa isugu daray horumarinta bulshadiisa.
Baro 10-ka Shaqaale ee aan Xirfadooda ku helin Qadarinta ay mudan yihiin